လွန်လေပြီးသော ချီးထုပ် အစိုးရ ပတ်စာခွါ ဖျာလိပ်ခြင်း - All Things Myanmar Burmese
Previous: « WTH!
Next: SAY NO TO RAPE! »
Myanmar Blog » Articles, Asia Entertainment, Myanmar/Burmese, Notes, shweDarling » လွန်လေပြီးသော ချီးထုပ် အစိုးရ ပတ်စာခွါ ဖျာလိပ်ခြင်း
လွန်လေပြီးသော ချီးထုပ် အစိုးရ ပတ်စာခွါ ဖျာလိပ်ခြင်း
Khine Thin Kyi @ shooting
The top 10 Worst-Paying College Degrees as researched by Yahoo! are:
Popular Khine Khin Oo from old days
photo credit to Khin Oo May
Credit to : Kyaw Thu Yein Cartoonist
၁၁၅ ကျွန်းသို့ ရောက်သောအခါ ရင်မောစရာပင် ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုကဆီးကြိုနေသည် Aureum 115 တဲ့ ။ ဘာလဲဟုမေးကြည့်ရာ ကျွန်းကိုဦးတေဇပိုင်သွားပြီတဲ့ ။ Aureum 115 အမည်ဖြင့်ဟိုတယ်ဖွင့်တော့မည်တဲ့။ ကျွန်းပေါ်သို့ ပင် တက်ကြည့်ခွင့်မရှိတာ့ပါတဲ့ ။ဟိုတယ်ဆောက်နေပါသည်တဲ့ ။
ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လဲ စက်လှေကပ်မိသည်မှတစ်ပါး ကျွန်းပေါ်သို့ မယ်မယ်ရရ၀င်မကြည့်ခဲ့ရပါ ။ လွန်ခဲ့သော ခြောက်လခန့်ကလည်း မြိတ်မြို့သို့ စာပေဟောပြောရင်း ပင်လယ်ထဲသို့ အလည်လိုက်ပို့ ရာ အလွန်လှသောနတ်သမီးရေတွင်းကျွန်းသို့ ရောက်ခဲ့ပေ၏ ။ ထိုကျွန်း၏ ကမ်းခြေအလျားပေ ၃၀၀ ခန့်တ၀ိုက်သာ ဧည့်သည်တွေသွားလာခွင့်ရှိသည် ။ စက်လှေတွေဆိက်ကပ်ခွင့်ရှိသည် ။ မိုင်နှင့်ချီ၍ရှည်သော ကျွန်းကြီးတစ်ခုလုံးက ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း၏သမီးအစုရှယ်ယာပါသောအဖွဲ့ ကို ပုလဲမွေးမြူရေးခေါင်းစဉ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ချပေးလိုက်ပါပြီဟုဆို၏ ။
ဘယ်တုန်းကလုပ်ပိုင်ခွင့်ရသလဲဟူမူ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမဆင်းခင် လပိုင်းကမှ ချပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတဲ့ ။ငှက်သိုက်ကျွန်း၊ရတနာကျွန်း၊ ညောင်ဦးဖီးကျွန်း စသော မြန်မာ့ရေပိုင်နက်ပင်လယ်ထဲမှအခြားကျွန်းများကိုတွေ့ သော်လည်း မည်သူပိုင်သလဲဆက်၍မမေးရဲတော့ ။ ဘယ်သူတွေ ဤကျွန်းကိုပိုင်သွားပြီဆိုသည့် စကားများကို မကြားရက်နိုင်လို့ဖြစ်ပါသတည်း။ 😥😥😥